Indlela Yokuphila Okuphakade | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Phendukani: ngokuba umbuso wezulu usondele” (Mathewu 4:17). “Ngoba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano esisha, elithululwa ngenxa yabaningi ngokuthethelelwa kwezono” (UMathewu 26:28). …
Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ngisenezinto eziningi engingazisho kini, kodwa ningekwazi ukuzithwala manje. Noma kunjalo, uma esefikile yena, uMoya weqiniso, uzoniholela kulo lonke iqiniso: ngoba akazukuzikhulumela, k…
Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Futhi uma noma ngabe yimuphi umuntu ezwa amazwi ami, engawakholwa, angimahluleli: ngoba angizanga ukuzokwahlulela umhlaba, kodwa ukusindisa umhlaba. Lowo ongalayo, engawamukeli namazwi a…